Te Hamafa An’i Syria Amin’ny Sarintanin’izao Tontolo Izao Ny Olo-malaza Iray Amin’ny Fananganana Ny Aterineto Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2015 6:27 GMT
Ny fitsabahan'i Moskoa ao Syria dia ny hampisy fiantraikany somary mahatsikaiky indray ao Rosia. Iray amin'ireo fizaran-tantara hafahafa indrindra amin'ity raharaha ity ny fanohanana tafahoatra ataon'i Anton Nossik ny fanafihana an'habakabaka vaovao. Iray amin'ireo manam-pahaizana voalohany momba ny aterineto Rosiana, ary mpanorina ny vohikalam-baovao malaza Lenta.ru i Nosssik, ary sokajian'ny maro ho iray amin'ireo mpamolavola goavana ny tontolon'ny bilaogy Rosiana ihany koa, nanohina ny maro i Nossik tamin'ny herinandro lasa raha namoaka tao amin'ny bilaoginy ny fankatoavany mafana fo ny hetsika daroka baomba vaovao ataon'i Kremlin ao Syria. Lasa lavitra mihoatra ny fankatoavana ny fanafihana an'habakabaka Rosiana i Nossik, ary manohana izay rehetra manampy amin'ny “famafana an'i Syria tsy ho eo ambonin'ny tany.”
Mpikambana malaza ao amin'ny mpanohitra demokratika ao Moskoa i Nossik, matetika mampiaka-peo manohitra ny famoretana ara-politika ao Rosia (indrindra fa ny famoretan'i Kremlin ny fahalalahan'ny aterineto). Jiosy ihany koa izy ary nandany fotoana marobe tao Isiraely, izay niasany ho mpanao gazety nanomboka tamin'ny taona 1990 ka hatramin'ny 1997.
Tamin'ny lahatsoratra navoakany tao amin'ny LiveJournal tamin'ny 1 Oktobra, mandrisika ny fandringanana an'i Syria izy, hoy i Nossik: “tahaka ny Isiraeliana,” mankasitraka ny tokony ampiasàna hery ara-tafika ao Syria aho. “Na iza na iza midaroka baomba an'i Syria androany, manohana izany aho,” Nampiany ihany koa hoe, “raha voafafa amin'ny sarintanin'izao tontolo izao izy, tsy handatsa-dranomaso aho – fa hiteny fotsiny hoe: misaotra.” Nanazava mihitsy aza izy fa nandritra ny 70 taona lasa, tsy nanao na inona na inona tao Afovoany Atsinanana i Syria “afa-tsy ny herisetra, ady, fihinan'olona, korontana, ary alahelo.” Nofaranan'i Nossik tamin'ny hafatra ho an'i Vladimir Putin ny lahatsorany izay manasa azy mba hanatevin-daharana ny finoana Jiosy, mba ho afaka amin'ny mety ho olana any amin'ny fiainana any ankoatra (izay tsy inoan'i Nossik amin'ny maha-Jiosy azy) noho ireo zanak'i Syria mety ho fatin'ny baomban'i Rosia.
Mbola misisika ao anaty korontana kokoa i Nossik raha nipoitra tao amin'ny Akon'i Moskoa mba hiresaka momba ny lahatsoratra bilaoginy. Tamin'ny antsafa, nilaza izy fa faly amin'ny “fahafatesan'ireo vehivavy, ankizy, ary zokiolona” ao Syria. Raha nanontaniana hoe: “Olombelona anie izy ireo e?” Hoy i Nossik namaly: “Tsia, Syriana izy ireo.”
Na dia manohana an-karihary ny daroka an'habakabaka ataon'i Kremlin aza ny fanehoan-keviny, olo-malaza maro no naneho hevitra feno fankahalana an'i Nossik. Tsy ankasitrahan'ny ankamaroan'ny Rosiana ny fihetsiny, na ireo mpanohana ny fitsabahan'i Rosia ao syria izany na ireo mpitsikera. Ny sasany aza mandray izany ho toy ny anton'ny hetsiky ny polisy. Niantso ny lehiben'ny fampanoavana tamin'ny fomba ofisialy i Georgy Fedorov, mpikambana ao amin'ny Antenimieraka sivika (izay manoro hevitra ny filoha Rosiana), mangataka amin'ny mpampanoa lalàna mba hanao fanadihadiana ny lahatsoratra bilaogin'i Nossik noho ny fitarihana fankahalana vahiny sy ny fankahalana ara-pivavahana.
Ankoatra izany, nanatontosa fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org alefa any amin'ny Komitim-Pamotorana sy ny fampanoavan'ny distrika ao Moskoa i Ilya Remeslo, milaza tena ho mpisolovava izay matetika mihantsy amin'ny alalan'ny aterineto ireo mpikambana ao amin'ny fanoherana. Mangataka amin'ny polisy i Remeslo mba hanao fanadihadiana an'i Nossik noho ny fitarihana fankahalana sy miantso fitarihana ady feno herisetra, izay samy voaràran'ny Fehezan-dalàna famaizana ao Rosia. Nahangona sonia maherin'ny 2.000 ny fanangonan-tsonia amin'izao fotoana izao.
Nahazo dika tamin'ny taratasin'i Fedorov nalefa tany amin'ny mpampanao lalàna ny tranonkalam-baovao Russkaya Planeta, izay efa tsy hita intsony ny ankamaroan'ny mpiasany tamin'ny Desambra noho ny toe-javatra hafahafa mahakasika matoan-dahatsoratra ary voalohany nitatitra izany izy. Somary mahatsikaiky ny vaovaon’ny Planeta Russkaya fa mety noho ny toromarika avy amin'ny Masoivoho Amerikana ho an'i John Tefft ao Rosia no anton'ny mahatonga an'i Nossik nanao izany. Porofon'izany, nilaza ny tranokala fa “nihaona mangingina i Nossik sy Tefft andro vitsy lasa izay nandritra ny” fihaonan'ny bilaogera Rosiana tao amin'ny Masoivoho Amerikana ao Moskoa. Ho porofo, manondro ny iray amin'ireo lahatsoratr'i Nossik tao amin'ny Instagram ny Russkaya Planeta, izay nilazany fa: nanonona ny voambolana hoe “mazel tov” i Tefft.
Voalaza fa efa tamin'ny volana Mey tamin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan’i Youri Kanner ilay lahatsoratra Instagram. Filohan'ny Foiben'ny Jiosy Rosiana i Kanner. Samy nanatrika ny fety i Tefft sy Nossik, saingy mampiseho an'i Tefft milaza hoe “mazel tov” ho an'ny vahoaka manontolo ny sarin'i Nossik fa tsy ho an'olona manokana.
Milaza ny Russkaya Planeta fa ny teny hoe “mazel tov” (nolazaina, manazava ny tranonkala, “ao anatin'ny toe-draharaha maharatsy ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy i Rosia sy ny vaovaon'ny ady amin'izao fotoana) dia famantarana ho an'ny bilagoera manohitra an'i Kremlin hamelona indray ny famelezana ny governemanta. Mahalasa saina ny rehetra ny fomba hanazavana ny fanohanana noana rà ataon'i Nossik amin'ny fanafihana an'habakabaka ataon'i Rosia ao Syria, saingy azo antoka fa fanontaniana tsy mba noeritreretin'ny Russkaya Planeta ho apetraka izany.